MASTIFF SHEPHERD DOG DOG FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Mastiff Shepherd Dog Dog Fampahalalana sy sary
Alika mpiandry ondry alemanina / anglisy Mastiff mifangaro alika
Harley the English Mastiff sy German Shepherd mifangaro amin'ny 2 1/2 taona— 'Ny renin'i Harley dia purebred Mpiandry Alemanina , milanja 75 lbs eo ho eo. Ny dadany dia olona madio Mastiff , milanja sahabo ho 180 lbs. 2.5 taona izy izao, milanja 150 lbs ary mbola mitombo! Miorina amin'ny 6 ft ny haavony amin'ny tongony aoriana. Alika mahafinaritra izy. Manana toetra miavaka izy. Tena natory izy ary malemy paika amin'ireo zanakay kely. Mandry am-paharetana eo anilany izy raha manatona azy amin'ny kilalao ankafiziny ilay zaza ... na dia tiany hilalao aza. Noroahiny tanteraka ilay kilalao ary nilelalela ny rantsan-tànana sy ny rantsan-tongony ary tiany ho fanaovana spaoro any an'ala. Raha tsy izany dia tiany ny mandry eo akaikin'ny ankizy mandritra ny lalao ataon'ny vondrona ary manakaiky azy ireo fotsiny. Raha milalao ety ivelany izy ireo dia manara-maso ny perimeter ny tokontany ary mamily ireo ankizy izay manakaiky ny perimeter amin'ny alàlan'ny fandehanana eo alohan'izy ireo mandra-manadino ny toerana alehany ary mihodina LOL. Tiany ny mandry manodidina, fa rehefa tonga any ivelany izy dia tia mitaky ady, milalao baolina tenisy sy rantsana lehibe! Fa ny kilalao tiany indrindra dia ilay mpanondro tamin'ny laser . Tena manan-tsaina izy. Fony aho bevohoka nolelainy foana ny kiboko. Isaky ny marary ao amin'ny trano fidiovana aho dia tonga izy ary mametraka ny lohany eo am-pofoako mandra-pahavitako, ary avy eo dia milelaka ny ranomasoko izy :) mitovy amin'ireo ankizy. Tena zazalahy mamy izy. Ambonin'izany rehetra izany dia izy mailo amin'ny manodidina azy . Ary raha misy mpiditra an-tsokosoko 'miseho amin'ny trano aho, rehefa tsy eo aho, ary navoakany fa tsy raisin'izy ireo tsara. (Notsapainay am-pifaliana ity namantsika ity ary faly izahay rehetra tamin'ny vokany!) Izy no biby fiompy malalantsika indrindra. Mavitrika izy hilalao fa tsy mitaky be loatra sy manimba. Tiany ny misolelaka nefa koa mahaleo tena, mailo nefa tsy mivily tsy an-kijanona, voajanahary fiarovana voajanahary tsara nefa tsy dia diso tafahoatra ary fantany hoe rahoviana no hiaro ary rahoviana no avelany hitantana ny alphas. Izy dia mpiambina malefaka azo antoka amin'ny ankizy kely ary na dia ny saka SY akoho . Manana ambany ambany izy fiara mihaza koa ... hanao fisafoana manodidina ny anay izy akoho isan-karazany hitazonana azy ireo ao an-tokotaninay, ary ny zavatra akaiky indrindra hanelingelina azy ireo dia ny mandehandeha mamaky ny andian'ondry indraindray mba hijery azy ireo miparitaka alohan'ny hametrahana azy rehetra ao anaty vondrona indray LOL! Tsy lazaina intsony fa milay toy ny afobe fotsiny izy :) Tsy manahy ny amin'ireo mpiditra an-tsehatra aho. '
Mpiandry Ondry Alemanina
Ny Mastiff Shepherd dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpiandry Alemanina ary ny English Mastiff . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Harley the English Mastiff sy German Shepherd mifangaro amin'ny 2 1/2 taona
Nala ilay Anglisy Mastiff / Mpiandry Alemanina dia mifangaro toy ny alika alika amin'ny 8 herinandro - 'Nala dia hazo fijaliana Alemanina Mpiandry X English Mastiff. Sivy herinandro izy. Izy dia alika kely matory sy matory, izay toa manana toetran-dehilahy mastiff aza. Tsy azonay antoka hoe hoatrinona ny halehibeny ho azony, ny mpitsabo dia mieritreritra lbs zato farafaharatsiny. Kamo be izy, matory mihoatra ny alika kely aza. Tena be vava izy ary hidradradradra rehefa tsy mandeha tsara na milaza ny fahafaham-pony fotsiny. 15 lbs izy izao. Tena afaka mahita ny karazany roa ao aminy ianao. Izy dia mastiff anglisy madio 50% ary mpiandry alemana 50% madio, samy voasoratra anarana ny AKC. Bibikely feno kodiarana tanteraka izy ary tsy mila anao tsy ho hitan'ny masony mihitsy. '
Nala ilay Anglisy Mastiff / Mpiandry Alemanina dia mifangaro ho alika alika amin'ny 8 herinandro
mpiandry alemanina mena
Nala ilay Anglisy Mastiff / Mpiandry Alemanina dia afangaro amin'ny alika kely mandritra ny 8 herinandro miaraka aminy amboa NAMANA
Lisitry ny alika mpiambina tsara
bullmastiff rottweiler afangaro alika kely amidy
miampita eo anelanelan'ny retriever volamena sy ny poodle
fifangaroan'ny terrier mainty sy fotsy
saint bernard bernese dog dog mix
ohatrinona ny manome alika 25 lb.
antsasaky yorkie antsasak'adiny shih tzu zanak'alika